Ulusu eluswini | La Leche League SA
Ukuluthi ngca ulusu eluswini usana lwakho yindlela yokulukhathalela. Usana lunxiba inapukeni kuphela luze lubekwe ngokukhuselekileyo kumabele akho aze. Oomama bangayenza le nto yokubeka iintsana zabo ulusu eluswini xa beqalisa ukuncancisa, bephinda bencancisa okanye nangeliphi ixesha wena nosana lwakho enifuna ngalo.
UKUBEKA USANA LWAKHO ULUSU ELUSWINI KUBALULEKILE NGENXA YOKUBA:
Kwenza usana luzive lukhuselekile.
Kukunceda ukuba ulwazi usana lwakho ibe nisondelelane ngakumbi.
Kunceda wena nosana lwakho nizole.
Kwenza ubisi olwenzayo lube luninzi ngakumbi.
Kunceda ubunzima bomzimba wosana bunyuke.
Kunceda ukuba iintsana libe neqondo leswekile esegazini eliqhelekileyo.
Kunokwenza usana olukhalayo luthule.
Kunceda ukugcina isingqi sokubetha kwentliziyo nesokuphefumla kosana siqhubeka.
Kunceda ukuba iqondo lobushushu bomzimba wosana lulawuleka, ibe ukuba unamawele, ukubambela iwele ngalinye kwibele ngalinye kunceda kunceda ukuba ibele ngalinye libe sele lilungile xa iwele ngalinye lilidinga.
Ukuba usana lwakho lizelwe ngaphambi kwexesha okanye luluncinci kakuhlu, ukumane ulubeka ulusu eluswini kunokunceda ukusindisa ubomi bosana.
Ulusu eluswini lunceda ukuba imeko yosana lwakho ingabimbi.
Ootata nabo banokuzibeka iintsana ngca kubo ulusu eluswini!
LUNGELA UKULUTHI NGCA USANA ULUSU ELUSWINI
Khulula umntla nebhodi yakho. Khulula zonke iimpahla zosana. Ungaliyeka lona inapukeni.
Ukuba kuyabanda kwigumbi enikulo, ungazombathisa wena nalo ngengubo.
Beka usana phakathi kwamabele akho – isifuba sosana simele sibe kwisifuba sakho. Imilenze neengalo zosana zigotywe, lube ngathi lisele elincinci.
Qinisekisa ukuba usana luyakwazi ukuphefumla – isidlele sosana sibe kulusu lwakho. Intloko yomntwana kufuneka ibe kufuphi kangangokuba ukwazi ukuyiphuza.
Hlala woyame umqolo esitulweni okanye ebhedini yakho. Kungabikho miqamelo okanye izinto zebhedi ezingakumbi kufuphi nosana.
ULUSU ELUSWINI YINTO YOMZALI NOSANA NGALUNYE
Kukhuselekile ukuyenza? Ewe, ukuba wena nosana nihleli kauhle ibe akukho zinto zebhedi okanye miqamelo ingakumbi.
Ndiyakwazi ukuyenza le nto yolusu eluswini noba ndinamawele? Ewe, usana ngalunye luphezu kwebele ngalunye, ungakwazi ukwenza ulusu eluswini.
Ukuba andiziva kamnandi? Chazela umntu ukuba awuziva kamnandi ukuba ungakwazi ukubamba usana lwakho.
Ukuba usana lwam luzelwe ngaphambi kwexesha? Ungenza ulusu eluswini ukuze imeko yosana lwakho ingabimbi.
Ndimele ndiyiqale nini le nto yolusu eluswini? Ungayiqala ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka usana luzelwe.
Ndingayiyenza le nto yolusu eluswini xa usana sele luludadlanyana? Ewe, into yolusu eluswini ibalulekile nakwiintsana ezisele zindadlanyana.
Into yolusu eluswini inganceda ekwenzeni ubisi olungakumbi? Ewe, into yolusu eluswini inganceda usana lwakho lubambe ingono ngomlomo luze luncance ngcono. Ukuba usana luncanca ebudeni kusenziwa ulusu eluswini, amabele akho aza kwenza ubisi olungakumbi.